Inkcazo emfutshane yokuCinga nokuTshabalalisa-iZiko eliSiseko
Inkcazo emfutshane yokuCinga kunye nokuPhelelwa
Inkcazo emfutshane yokuCinga nokuPhelela
Yintoni ebaluleke kakhulu kuwe ebomini?
Ukuba impendulo yakho kukufezekisa ukuqonda ngakumbi kwakho kunye nehlabathi esiphila kuyo; ukuba kuqonda ukuba kutheni silapha emhlabeni kunye nento esilindele emva kokufa; ukuba kukwazi injongo yangempela yobomi, ubomi bakho, UkuCinga nokuPhelela linikeza ithuba lokufumana ezi mpendulo. Kwabanye abaninzi.
Kule maphepha, ulwazi oludala kunokuba imbali ibhaliwe ngoku iyaziwa kwihlabathi-malunga noBugcisa. Ixabiso elikhulu le nto kukuba linokusinceda siziqonde kangcono thina, indalo. . . nangaphezulu. Le ncwadi ayikho imfundiso eya kukuxelela indlela yokuphila ubomi bakho. Umbhali uthi isifundo esibalulekileyo kumntu ngamnye kunye nomfazi ngamnye kukuzikhethela oko ufanele ukwenze nokuba ungenzani. Wathi: "Andizivumeli ukuba ndishumayele nabani na; Andizibukeli njengomshumayeli okanye utitshala. "
Nangona lo msebenzi mkhulu ubhalelwe bonke abantu, bambalwa kakhulu kwihlabathi belifumene. Kodwa amanxweme aya kutshintsha njengoko baninzi bafuna ukuqonda intsingiselo yemingeni yomntu kunye nehlabathi jikelele esibhekana nayo, kwakunye nentlungu kunye nokubandezeleka okudla ngokuhamba nabo. Umnqweno wombhali we-sincerest kwakukho UkuCinga nokuPhelela ukukhonza njengendlela yokukhanya ebhakanyeni ukunceda bonke abantu ukuba bancede.
Bobabini umfundi ongenamdla kwaye umfundi onamandla kakhulu onokwazi olunzulu akanakunceda kodwa uyamangaliswa ngobuninzi, ubuninzi kunye neenkcukacha zezifundo ezibhekiswe kule ncwadi. Abaninzi baya kubuza ukuba umlobi wafumana njani ulwazi. Indlela engavumelekanga ngayo lo mdwebo wobugcisa ochazwe ngayo ichazwe kwiNkcazo yeMbhali yoMbhali kunye ne-Afterword.
I-Percival yaqala ukucacisa isahluko UkuCinga nokuPhelela Amava alandelayo okukhanyisa okunamandla, awayebhekisela kuye njengokuba uyazi ukuba nguMncedi. Uthe ukuba ukuqaphela uNgqiqo kubonisa ukuba "engaziwayo" kumntu oye waqonda. La mava avumela ukuba uPercival afumane ulwazi ngokukhawuleza ngolwazi malunga nendlela ethile yokugxila, okanye oko akubiza ngokuthi "ukucinga kwangempela." Kwakule ndlela yenziwa ngayo le ncwadi.
Kukho ubungqina bombhalo kaPercival ngenxa yokuba ayikho into yokucinga, inkolelo okanye ukuzenzela. Ukuzinikezela kwakhe ngokungenakuqinisekiswa kwindlela ephakamileyo yeyona nyaniso ayinakunqanda. Le ncwadana ekhuluma nokulangazelela kwintliziyo yomntu ukwazi ukuba kutheni uluntu lufana noko. UkuCinga nokuPhelela yintetho engaqhelekanga eyayiquka ukuphela kweentlanga ezibonakalisiweyo nezingabonakaliyo; enjalo, inokusetyenziswa kwimpilo yabo bonke abafumanisa umyalezo wayo wokukhulula.